७ मन्त्री थपिए - गृहमन्त्रीमा अधिकारी, कोको छन् नयाँ अनुहार ? | दर्पण दैनिक
७ मन्त्री थपिए - गृहमन्त्रीमा अधिकारी, कोको छन् नयाँ अनुहार ?
प्रकाशित मिति: २०७८ जेष्ठ २७ गते ११:५९
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका छन्। ओलीले यसअघि गत शुक्रबार पनि जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ राजेन्द्र पक्षका १० जनालाई मन्त्री बनाउदै मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका थिए।
अब बन्ने मन्त्रीहरु एमाले ओली पक्षबाटै रहने बुझिएको छ। रिक्त रहेका सात मन्त्रालयमा आज मन्त्री नियुक्तिको तयारी भएको प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरुले बताएका छन्।
श्रोतका अनुसार ओलीले गृहमन्त्रीमा खगराज अधिकारी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा नैनकला थापालाई नियुक्त गर्नलागेका छन् । थापा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी श्रीमती हुन्। त्यस्तै, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नारदमुनि राना, कृषिमन्त्रीमा ज्वालाकुमारी शाह, उद्योगमा राजकिशोर यादव, सामान्य प्रशासनमा गणेश पहाडीलाई मन्त्री बनाउने भएका हुन्।
रक्षा मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री आफैँले राखेका छन्। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालय रहने गरी मोहन बाँनिया, र वन राज्यमन्त्रीमा आशा विक रहेका छन्। मन्त्रीहरुको आजै साँझ शपथ राखिएको छ ।